Dadka xanuunka ku qoran oo ka cabaneya go’aannada khasnadda ceeymiska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Helene Ydenius oo xirfaddeedu tahay kalkaaliye caaf9imaad ee dar-yeelka indhaha. sawir: Anna-Karin Sivberg/Sveriges Radio.
Dadka xanuunka ku qoran oo ka cabaneya go’aannada khasnadda ceeymiska
"Haddii aan nolol la isu ogoleeyn maxaa la isku daweeyn?"
La cusbooneeyay måndag 18 december 2017 kl 10.31
La daabacay måndag 18 december 2017 kl 08.48
Kor ayey u sii kaceyaan tirada dadyoowga cabashada ka sheeganeya hayadda ceeymiska qaranka iyada oo laga jarey gunnadii xanuunka oo ey qaadan jireen. Dhibaatada ugu wayni waxay tahay in aaney dadyoowga xanuunsani fahansaneyn hawlaha lagu qiimeeyo awooddooda shaqo.
Helene Ydenius,oo ay xirfaddeedu tahay kalkaaliso dar-yeelka caafimaadka indhaha oo uu ku dhacay cudurka maskax dhiig (Stroke) ayaa abiil ka qaadatay go’aankii gunnada xanuunka looga jartey. Khasnadda ceeymiska ayaa ku qiimeeysay inay haweenaydaasi awooddo inay ku howl-gasho shaqo buuxda, haddii ay baarbaarato shaqo sahlan oo aan kadeed lagu dareemayn.
–Xaqiiqdii ma garan karo hal shaqana ha noqotee. Wax khalad ah uma arko inaan ku shaqeeyo dhulka oo aan xaaqo, hase yeeshee maahan mid aan ka soo bixi karo. Waayo gurigaygaba kuma filni inaan xaaqdo, sida ay sheegtay.
Kalkaaliso Helene Ydenius ayaan fahami karin waxa ay khasnadda ceeymisku ula jeedo inay ka shaqeeyn karto shaqo sahlan oo aan kadeed lahayn, sida ku cad warqadda dhakhtarka in aanay shaqeeyn karin wax ka badan 25%, noocay doonto shaqadu ha noqotee.
Iyada oo iminka ey kor u sii kaceyaan tirada dadyoowga abiilka ka qaata go’aannada gunnada shaalaha ee khasnadda ceeymiska kolka ay ku cabirto dhammaan goobaha kala duwan ee suuqa shaqada.
Laanta ammaanka ee ururrada shaqaalaha ee LO- TCO ayaa illaa iminka ka caawiyay iney dacwad abiil la gudbiyaan 300 oo ruux, tiradaasina oo 200 ka badan kolka loo barbar-dhigo bilihii dhiggooda ee sannadkii ka horreeyay, oo sida uu aamin-san yahay madaxa laantaasi Robert Sjunnebo inay la xiriirto sida ay khasnadda ceeymisku u macneeyso waxa loola jeedo shaqo caadi ah.
–Waxaannu ula jeednaa inay khasnadda ceeymisku ay shuruucda u ytarjumatay hab khaldan. Haddii si dhab ah xeerka loo tarjumo waa in lagu qiimeeyo howlaha jira, sida waardiye ama ama kalkaaliye. Balse maahan midda ay khasnadda ceeymisku sameeyso, waxay sameeyaan shaqooyin aan jirin oo ey dad yari fahmi karaan, sida uu sheegay Robert Sjunnebo.
Dacwooyinka abiilka ee kor u kaceya ayaa salka ku haya tirada badatay ee diidmada. Bishii juun ayay khasnadda ceeymisku diidmo ku siisay dadyoowga soo dalbadey gunnada xanuunka ee horay loogu jirey 13%. Tiradaasi oo gaarsiisnayd 6% muddo iminka saddex sannadood laga joogo.
Cecilia Udin, isku duwaha qaran ee khasnadda ceeymiska, ayaan aaminsanayn iney tallaabo khaldan qaadeen kolka ey dadyoowga gunnada dalbada u diraan shaqooyin ka sahlan, iyaga oo aan qeexin shaqdu waxa ay tahay.
–Ma ahan khasnadda ceeymiska howsheeda inay farta ku fiiqdo shaqo mucayin ah. Waxaannu raacnaa oo keliya xeerka iyo dhabba-tuska, sida ay sheegtay.
Hase yeeshee kalkaaliso Helene Ydenius, oo iminka abiil ka qaadatay gunnada xanuunka ee laga jaray ayaa ka xanaaq-san habka ay khasnadda ceeymisku u qiimeeyso awoodda shaqada.
–Waxaan is weeydiinayaa, maxay tahay sababta la isu siiyo dar-yeel caafimaad ee wanaag-san ee nolosha lagu badbaadiyo haddii aan dabadeed la isu ogoleeyn nolol waa wax lala yaabo, sida ay sheegtay Helene Ydenius.